Internet Download Manager 6.12 Beta3(4.5 MB) | IT Sharing Network
Betal2ထွက်တာမှ မကြာသေးဘူး Beta3ထွက်ပြန်ပြီ ကျွန်တော်လည်း မှားမှာဆိုးလို့ ကိုယ်တိုင်စမ်းတင်ပြီးမှ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ... ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောပြချင်တာက ဒေါင်းလော့ဆွဲလက်စ The Amazing Spiderman 2012 ကားကတ၀က်တပျက်ကြီးဖြစ်နေ ဆွဲထားတာကလည်း 300 MB ကျော်နေပြီ Uninstall လုပ်လိုက်ရင်လည်း ဆွဲလက်စကို နှမြောနေတာနဲ့ ဒီအတိုင်းတင်ကြည့်မယ်ကွာဆိုပြီး idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါတယ်... ထုံးစံအတိုင်း next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... အားလုံးအေးဆေးပဲပြီးသွားတယ် ဒေါင်းလက်စတွေလည်း မပျက်ဘူး Betal3လည်းဖြစ်သွားပါတယ်... IDM ကို uninstall လုပ်ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ ကွန်ပျူတာကို Restart ချရတဲ့အလုပ် သက်သာသွားတာပေါ့... ကျွန်တော်တင်တာတော့ ဒီအတိုင်းအဆင်ပြေပါတယ်... တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ စမ်းတင်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေမပြေကို ကွန့်မန့်လေးများ လာပြန်ရေးပေးစေလိုပါတယ်... ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကဆို idm အသစ်တင်ချင်ရင် အဟောင်းကို unistall လုပ်ပြီးမှ တင်နေကြပါ စမ်းလည်းမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး... အခုစမ်းကြည့်ပေးကြပါဦး...
The Amazing Spiderman 2012 (669.59 MB)
ကျွန်တော့်လို ကလေးစိပ်မကုန်သေးပဲ ၀ါသနာတူလို့
The Amazing Spiderman 2012 (669.59 MB) ကို download ယူလိုရင် ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ..
မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က Link မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီဗျာ။
Install လုပ်ပြီး Patch ချိုးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။